Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » Ingxelo yomngcipheko omtsha we-CDC kwi-COVID Shot yesithathu
Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-CDC iqalise ukusebenzisana
Udubulo lwesithathu. Zithini iimpembelelo kwinkqubo yezempilo yoluntu?
Ngokwengxelo ye-CDC namhlanje iimpembelelo kwimpilo yoluntu o-v ekhuselekileyo akafumananga iipateni ezingalindelekanga zempembelelo ezimbi emva kwethamo elongezelelweyo lokugonya i-COVID-19.
I-CDC ithembise ukuba iya kuqhubeka nokubeka iliso kukhuseleko lokugonya, kubandakanya iidosi ezongezelelweyo ze-COVID-19.
Isifundo se-CDC malunga nokuJongwa koKhuseleko kwiDosi eyongezelelweyo ye-COVID-19 Vaccine
Yintoni esele isaziwa malunga ne-the booster shot?
Phakathi kwama-306 e-Pfizer-BioNTech abathathi-nxaxheba bezonyango, iimpendulo ezimbi emva kwethamo 3 zazifana nezo zasemva kwethamo 2.
Yintoni eyongezwe yile ngxelo kwimbumbulu yenombolo 3 ekhutshwe yiCDC namhlanje?
Ngexesha lika-Agasti 12 – Septemba 19, 2021, phakathi kwababhalisi be-v-safe be-12,591 abagqibe uphando lokuhlola impilo emva kwawo onke amathamo ama-3 e-mRNA COVID-19 vaccine, i-79.4% kunye ne-74.1% baxela ukusabela kwasekhaya okanye kwenkqubo, ngokulandelelana, emva idosi yesithathu; I-77.6% kunye ne-76.5% zichaze ukusabela kwasekhaya okanye kwenkqubo emva kwethamo lesibini, ngokulandelelana.
Ziziphi iimpembelelo zempilo yoluntu?
Iingxelo zokuzithandela kwi-v-safe azifumananga iipateni ezingalindelekanga zokuphendula gwenxa emva kwethamo elongezelelweyo lokugonya i-COVID-19. I-CDC iya kuqhubeka nokubeka iliso kukhuseleko lokugonya, kubandakanya iidosi ezongezelelweyo ze-COVID-19.
Nge-12 ka-Agasti ka-2021, uLawulo lwezoKutya kunye noLawulo lweziyobisi (i-FDA) luhlengahlengise iZigunyaziso zokuSebenzisa ngokungxamisekileyo (i-EUAs) kwizitofu zePfizer-BioNTech kunye neModerna COVID-19 ukugunyazisa ulawulo lwedosi eyongezelelweyo emva kokugqitywa kothotho lokugonya lokuqala kubantu abafanelekileyo ukumodareyitha iimeko ezinzima zokuzikhusela kwizifo (1,2). NgoSeptemba 22, 2021, i-FDA yagunyazisa idosi eyongezelelweyo yokugonya i-Pfizer-BioNTech ≥6 iinyanga emva kokugqitywa kothotho lokuqala phakathi kwabantu abaneminyaka eyi-65 iminyaka, abasemngciphekweni omkhulu we-COVID-19, okanye ukubonakaliswa kwabo emsebenzini okanye kumaziko kubabeka umngcipheko omkhulu we-COVID-19 (1). Iziphumo ezivela kwisigaba sesithathu solingo lweklinikhi oluqhutywa yiPfizer-BioNTech ebandakanya abantu abangama-3 abaneminyaka eyi-306-18 iminyaka ibonakalise ukuba iimpendulo ezibi emva kokufumana idosi yesithathu elawulwa kwiinyanga ezi-55 ukuya kwezi-5 emva kokugqitywa kwethamo lesibini le-mRNA yokuthintela uthotho yayifana ezo zichaziweyo emva kokufumana idosi 8; ezi mpendulo zichaseneyo zibandakanya indawo enesitofu ukuya kumodareyitha yenaliti kunye nokusabela kwenkqubo (3). I-CDC iphuhlise i-v-safe, ngokuzithandela, inkqubo yokujonga ukhuseleko esekwe kwi-smartphone, ukubonelela ngolwazi malunga nokusabela okungalunganga emva kogonyo lwe-COVID-19.
Ngokuhambelana nokugunyaziswa kwedosi eyongezelelweyo kubantu abaneemeko zokungafikeleli kwisistim, iqonga le-v-safe lahlaziywa ukuze kuvunyelwe ababhalisi ukuba bafake ulwazi malunga needosi ezongezelelweyo zokugonya ze-COVID-19 ezifunyenweyo. Ngexesha lika-Agasti 12 – Septemba 19, 2021, bebonke ngama-22,191 ababhalise ngokukhuselekileyo baxele ukufunyanwa kwethamo elongezelelekileyo lokugonya i-COVID-19. Uninzi (i-97.6%) luxele uthotho lwe-2-idosi yokugonya ye-mRNA elandelwa yidosi yesithathu yento efanayo yokugonya. Phakathi kwabo bagqibe kuvavanyo lokuhlolwa kwezempilo kuzo zonke iidosi ezi-3 (12,591; 58.1%), i-79.4% kunye ne-74.1% zichaze ukusabela kwasekhaya okanye kwenkqubo, ngokwahlukeneyo, emva kwedosi 3, xa kuthelekiswa ne-77.6% kunye ne-76.5% eyaxela ingingqi okanye inkqubo. ukusabela, ngokulandelelana, emva kwedosi 2. Ezi ziphumo zokuqala azibonisi iipateni ezingalindelekanga zempembelelo ezimbi emva kwethamo elongezelelweyo lokugonya i-COVID-19; Uninzi lwezi mpendulo zichaseneyo zaziphakathi okanye ziphakathi. I-CDC iya kuqhubeka nokubeka iliso kukhuseleko lokugonya, kubandakanya nokhuseleko lweedosi ezongezelelweyo zokugonya ze-COVID-19, kunye nokubonelela ngedatha yokukhokela iingcebiso malunga nokuthintela kunye nokukhusela impilo yoluntu.
I-V-safe yindlela yokuzikhusela, esekwe kwi-smartphone esekwe e-US; abantu abagonyiweyo abakulungeleyo ukufumana imveliso egunyazisiweyo okanye enelayisensi yokubhalisa banokubhalisa kwindawo ekhuselekileyo. Iqonga le-v-safe livumela ababhalisi abakhoyo ukuba banike ingxelo yokufumana idosi eyongezelelweyo yesitofu se-COVID-19 kunye nababhalisi abatsha bokufaka ulwazi malunga nawo onke amayeza e-COVID-19 afunyenwe. Iisaveyi ezikhuselekileyo nge-V zithunyelwa ngeentsuku eziyi-0 ukuya kwezi-7 emva kwethamo ngalinye lesitofu sokugonya kwaye zibandakanya imibuzo malunga nendawo yenaliti yendawo kunye nokuphendula kwenkqubo kunye nefuthe lezempilo.† Abasebenzi abasuka kwiNkqubo yokuNika ingxelo ngezeNdawo eziGonyo (VAERS) ababonisa ukuba unyango lufunwa emva kogonyo kwaye bakhuthaze okanye baququzelele ukugqitywa kwengxelo ye-VAERS, ukuba kubonisiwe.§
Phakathi kwababhalisi be-v-safe ababhale ingxelo yokufumana idosi yokugonya eyongezelelweyo ye-COVID-19 nge-12 ka-Agasti-Septemba 19, 2021, idatha yabemi, ukusabela kwasekhaya nakwinkqubo, kunye neempembelelo zempilo ezichazwe ngeentsuku ze-0-7 zachazwa ngumzekelo wogonyo (okt. , umenzi wesitofu sokugonya esifunyenwe ngedosi nganye). Abantu abaye baxela ukuba bafumana uthotho oluphambili kubavelisi abohlukeneyo okanye umenzi owayengaziwa okanye ongafumanekiyo e-United States, okanye iidosi ezi-2 zokugonya emva kokufumana iyeza lokuthintela idosi elinye iJanssen (Johnson & Johnson) (150) ababandakanywa kuhlalutyo. Iziphumo ezibi emva kokufumana idosi eyongezelelweyo.
Ixesha elidlulileyo ukugqitywa kothotho lokugonya lokuqala ukufumana idosi eyongezelelweyo lachazwa yipateni yokugonya. Iiprofayili zesiganeko esibi emva kwedosi yesi-2 neyesi-3 zathelekiswa kubabhalisi abafumene isitofu sokugonya se-mRNA kumenzi omnye wazo zonke iidosi ezi-3.¶ Isoftware ye-SAS (inguqulelo 9.4; iZiko leSAS) lalisetyenziselwa ukwenza lonke uhlalutyo. Le misebenzi yokujonga yaqwalaselwa yiCDC kwaye yenziwa ngokungqinelana nomthetho osebenzayo womgaqo-nkqubo kunye nomgaqo-nkqubo weCDC. **
Ngexesha lika-Agasti 12 – Septemba 19, 2021, inani elipheleleyo lababhalisi abakhuselekileyo be-22,191 baxele ukufunyanwa kwethamo elongezelelekileyo lokugonya i-COVID-19 emva kokugqiba uthotho lokuqala (1 Table). Phakathi kwezi, i-14,048 (i-63.3%) yayingabafazi, kwaye malunga ne-30% nganye yayineminyaka eyi-18-49, 50-64, kunye ne-65-74 yeminyaka.
Uninzi lwababhalisi (21,662; 97.6%) baxele ukuba bafumene idosi yesithathu kumenzi omnye njengoluhlu lokugonya lokuqala lwe-mRNA, kubandakanya i-98.6% yabamkeli beModerna kunye ne-98.2% yabamkeli bePfizer-BioNTech. Bambalwa ababhalisi (341; 1.5%) baxele uthotho lokuthintela i-mRNA olandelwa lilinye idosi yokugonya ye-mRNA evela kumvelisi owahlukileyo, idosi yokugonya iJanssen emva kokufumana uthotho lokugonya lokuqala lwe-mRNA (10; 0.05%), okanye olongezelelweyo idosi yokugonya i-COVID-19 kuwo nawuphi na umenzi emva kogonyo lweJanssen (178; 0.8%).
Phakathi kwama-22,191 ababhalise ngokukhuselekileyo, ixesha eliphakathi ekugqityweni kothotho lokugonya lwe-COVID-19 lokufumana idosi eyongezelelweyo yayiziintsuku ezili-182 (uluhlu lwe-interquartile [IQR] = iintsuku eziyi-160-202) (2 Table). Phakathi kwabo bafumene iidosi ezi-2 zokugonya iJanssen, ixesha eliphakathi phakathi kweedosi lalifutshane (iintsuku ezingama-84; IQR = iintsuku ezili-16-136).
Indawo (16,615; 74.9%) kunye ne-systemic (15,503; 69.9%) iimpendulo bezixelwa rhoqo phakathi evekini emva kwethamo elongezelelekileyo lokugonya i-COVID-19, ubukhulu becala kusuku emva kogonyo. Ukuphendula okuxelwa rhoqo yayiyintlungu yendawo yenaliti (15,761; 71.0%), fatigue (12,429; 56.0%), kunye nentloko (9,636; 43.4%).
Phakathi kwama-22,191 abafumana idosi, i-7,067 (i-31.8%) ixele iimpembelelo zempilo, kwaye malunga ne-28.3% (6,287) baxela ukuba abakwazanga ukwenza imisebenzi yesiqhelo yemihla ngemihla, ikakhulu kusuku emva kogonyo. Uncedo lwezonyango lufunwe ngababhalisi abangama-401 (1.8%), kwaye abalishumi elinesithathu (0.1%) balaliswa esibhedlele. Izizathu zokufumana unyango okanye ukulaliswa esibhedlele azichongwanga kuvavanyo olukhuselekileyo; Nangona kunjalo, ababhalisi ababonisa ukuba unyango lwalufunwa emva kogonyo kunxitywa ngabasebenzi be-VAERS kwaye bakhuthazwa ukuba bagcwalise ingxelo ye-VAERS.
Phakathi kwama-21,658 ababhalisileyo abakhuselekileyo abafumene iyeza lokugonya le-mRNA kuzo zonke iidosi ezi-3, i-12,591 (58.1%) yagqiba ubuncinci kuvavanyo lwezempilo ngeentsuku ezi-0-7 emva kwayo yonke idosi ezi-3; I-79.4% kunye ne-74.1% zichaze ukusabela kwasekhaya okanye kwenkqubo, ngokulandelelana, emva kwethamo 3, xa kuthelekiswa ne-77.6% kunye ne-76.5% ezixele ingxelo yempembelelo yangaphakathi okanye yenkqubo, ngokwahlukeneyo, emva kwedosi. iimpendulo zichazwe rhoqo emva kwethamo 2 kunedosi 3 (6,283; 3% kunye no-2; 5,323%; p-value = 84.7) (inani). Ukuphendula kwenkqubo kuye kwaxelwa rhoqo rhoqo emva kwethamo 3 kunedosi 2 (4,963; 79.0% kunye no-5,105; 81.3%; p-value <0.001).
Phakathi kwababhalisi abafumene iidosi ezi-3 zePfizer-BioNTech (6,308), iimpendulo zasekhaya zaxelwa rhoqo emva kwethamo 3 kunedosi 2 (4,674; 74.1% kunye no-4,523; 71.7%; p-value <0.001). Ukuphendula kwenkqubo kuye kwabikwa kancinci rhoqo emva kwethamo 3 kunedosi 2 (4,363; 69.2% kunye 4,524; 71.7%; p-value <0.001). Phakathi kwabo baxele iintlungu emva kwethamo le-3 yesitofu sokugonya se-mRNA, uninzi lweempendulo lwaluzolile (4,909; 51.4%) okanye ukumodareyitha (4,000; 41.9%); Intlungu ebuhlungu (echazwa njengentlungu eyenza ukuba imisebenzi yemihla ngemihla ibenzima okanye ingenzeki) ixelwe ngo-637 (6.7%).
Ukusukela ngoSeptemba 19, 2021, malunga ne-2.21 yezigidi zabantu e-United States bafumene iidosi ezongezelelweyo zokugonya ze-COVID-19†† emva kokugqitywa kothotho lokuqala. Ukusukela nge-12 ka-Agasti- Septemba 19, 2021, azikho iipateni ezingalindelekanga zempembelelo ezibi eziye zaqatshelwa phakathi kwama-22,191 ababhalisileyo bekhuselekile abafumana idosi eyongezelelekileyo yesitofu sokugonya se-COVID-19. Uninzi lweempendulo zengingqi nezesixokelelwano zaziphakathi ukuya kumodareyitha, okwethutyana, kwaye zihlala zixelwa kusuku emva kogonyo. Uninzi lwababhalisi abafumene idosi eyongezelelweyo baxela uthotho lokugonya lokuqala lwe-mRNA olulandelwa yidosi yesithathu evela kumenzi ofanayo.
Uvavanyo lweklinikhi lwePfizer-BioNTech, olubandakanya abantu abangama-306 abaneminyaka eli-18-55 ubudala, lubonise ukuba iimpendulo emva kwedosi 3 zazithelekiswa nezo zixelwe emva kwedosi 2 (3). Nangona kunjalo, olu hlalutyo lwe-v-data ekhuselekileyo lufumene iimpendulo zalapha ekhaya zixhaphake kakhulu kwaye ukusabela kwenkqubo kungafane kwenzeke emva kwedosi 3 yePfizer-BioNTech.
Iipateni zokuphendula okungalunganga okujongwa emva kwedosi 3 yesitofu sokugonya seModerna okanye iPfizer-BioNTech yayihambelana nokusabela okuchazwe ngaphambili emva kokufumana idosi 2
Inani lababhalisi ababonakalise ukuba bafumene iidosi ezi-2 zesitofu seJanssen okanye bafumana idosi yabo eyongezelelweyo evela kumvelisi owahlukileyo kolo luthotho lwabo lwaluluncinci, kunciphisa nasiphi na isigqibo.
Idatha kukhuseleko okanye ukusebenza kogonyo ngeemveliso zokugonya ze-COVID-19 ezivela kubavelisi abohlukeneyo zilinganiselwe; IKomiti yeeNgcebiso ngeZenzo zoGonyo (i-ACIP) icebisa ukuba abantu abanokuthomalalisa iimeko ezinobungozi ezingafumanekiyo bafumane idosi yesithathu yokugonya i-mRNA COVID-19 kumvelisi ofanayo noluhlu lwabo lokuqala.
Iingcebiso ze-CDC zedosi eyongezelelweyo azibandakanyi okwangoku abantu abafumene isitofu sokugonya iJanssen.
Ngexesha eligutyungelwe lolu phononongo, izindululo ze-ACIP zedosi eyongezelelweyo yesitofu sokugonya se-COVID-19 sasikhawulelwe kubantu abanomodareyitha kwiimeko ezinobuzaza zokungafikeleli kwisifo abaye bafumana
Amayeza ama-2 okugonya i-mRNA.
Uphononongo olwenziwe phakathi kwezigulana ze-hemodialysis ezingafakwanga emzimbeni zichaze ukuba ukusabela kwendawo kunye nenkqubo emva kwethamo 3 lokugonya kwePfizer-BioNTech kwakufana nezo zasemva kwethamo 2.¶¶ Iingxelo zamva nje zosulelo kubantu abagonywayo kunye nokwanda kokuxhaphaka kwe-B.1.617.2 (Delta) okwahlukileyo kwe-SARS-CoV-2, intsholongwane ebangela i-COVID-19, phakathi kwabantu abagonyiweyo inokubangela ukuba abanye abantu bafune idosi eyongezelelweyo ngaphandle kwezindululo. Ixesha eliphakathi ukusuka ekugqityweni kothotho lokuqala ukuya ekufumaneni idosi eyongezelelweyo yayimalunga neenyanga ezi-6; Ke ngoko, abantu ababekwe phambili ngexesha lokukhutshwa kwezitofu ze-COVID-19, kubandakanya abasebenzi bezempilo kunye nabantu abadala, banokufumana idosi eyongezelelweyo.
Iziphumo kule ngxelo zixhomekeke kwimida emine ubuncinci. Okokuqala, ukubhaliswa kwi-v-safe kwenziwa ngokuzithandela kwaye ayimeli abantu abagonyiweyo base-US; uninzi lwabathathi-nxaxheba bazichaze njengabaMhlophe nabangengabo abeSpeyin. Okwesibini, ngeli xesha lokufunda, iingcebiso zedosi ezongezelelekileyo zazinomda kubantu abaneemeko zokungafezekisi abagqibe uthotho lokugonya lwe-mRNA COVID-19; Nangona kunjalo, i-v-safe ayibandakanyi ulwazi malunga nenqanaba lomzimba.
Abamkeli benqanaba elongezelelekileyo banokubandakanya abantu abaneemeko zokungafikeleli kwisifo. Okwesithathu, ubudlelwane obunobangela phakathi kwento yokugonya kunye nesigulo esibi esibi esichaziweyo emva kogonyo asinakumiselwa kusetyenziswa idatha ekhuselekileyo. Okokugqibela, idatha engonelanga ibikhona ukufumanisa iipateni zokungalunganga emva kokufumana idosi eyongezelelweyo evela kumenzi ohlukileyo kuthotho lokuqala okanye isitofu sokugonya iJanssen.
Idosi eyongezelelweyo yesitofu sokugonya se-mRNA COVID-19 siyacetyiswa kubantu abanomodareyitha kwiimeko ezinobuzaza bokungaziphathi kakuhle (5).
I-CDC icebise idosi eyongezelelweyo yokugonya kwe-Pfizer-BioNTech ≥6 iinyanga emva kokugqitywa kothotho lokuqala lokugonya phakathi kwabantu abaneminyaka engama-years65 iminyaka, abahlali kwizicwangciso zokhathalelo lwexesha elide, kunye nabantu abaneminyaka engama-50-64 iminyaka abaneemeko zonyango ezingaphantsi; Abantu abaneminyaka eli-18 ukuya kwengama-49 ubudala abaneemeko ezisisiseko zonyango kunye nabantu abaneminyaka eli-18 ukuya kwengama-64 ubudala abasemngciphekweni wokuchaphazeleka kunye nokuhanjiswa kwe-COVID-19 ngenxa yemeko yomsebenzi okanye yeziko abanokufumana idosi eyongezelelweyo ngokusekwe kwinzuzo kunye nomngcipheko wabo
Uhlalutyo lokuqala lwedatha yezokhuseleko evela kubabhalisi be-22,000 v ekhuselekileyo ibonisa ukuba iimpendulo zalapha ekhaya zonyuke kancinci kwaye iimpendulo zenkqubo ziyancipha kancinci emva kwethamo 3 le-mRNA kunasemva kwethamo 2.
Akukho ziipatheni zingalindelekanga zeempendulo ezichongiweyo ezichongiweyo; ezo zichaziweyo bezimnene ukuya kumodareyitha kwaye zidlulile. I-CDC iya kuqhubeka nokubeka iliso kukhuseleko lweedosi ezongezelelweyo zokugonya ze-COVID-19. Idatha eyongezelelweyo yokuphendula okungalunganga okunxulunyaniswa neendibaniselwano ezahlukeneyo zokugonya kunye nexesha lokugqitywa kothotho lokuqala kuya kubaluleka ekukhokeleni izindululo zempilo yoluntu.
Emodeni,%† (n = 10,601)
I-Pfizer-BioNTech,%† (n = 11,412)
Ithamo 3 Moderna
Ithamo 3 Pfizer-BioNTech
Umthamo 3 Janssen
Umthamo 2 Janssen
Ithamo 2 Moderna
Ithamo 2 Pfizer-BioNTech
imazi 63.8 63.9 50.0 63.0 63.5 33.3 39.6 57.8 59.1 63.3
indoda 35.1 34.0 50.0 36.1 36.0 66.7 60.4 42.2 40.9 35.7
Iqela lobudala, yrs
I-Hispanic / iLatino 8.0 15.3 0 8.2 5.6 0 25.0 6.3 10.6 8.2
EyobuHispanic / iLatino 87.7 81.9 100 87.6 90.9 100 54.2 89.1 89.4 87.6
I-AI / AN 0.5 0.7 0 0.5 0.5 0 2.1 0 0 0.5
Mnyama 5.6 3.5 0 6.2 1.5 16.7 6.3 6.3 9.1 5.9
I-NHPI 0.2 0 0 0.3 0.5 0 4.2 0 0 0.3
Mhlophe 82.6 82.6 100 80.4 85.8 66.7 56.3 71.9 69.7 81.4
I-Multiracial 1.9 2.1 0 1.8 1.5 16.7 4.2 4.7 3.0 1.9
omnye 2.1 4.2 0 2.1 0.5 0 6.3 1.6 3.0 2.1
Izifinyezo: I-AI / AN = Indiya yaseMelika / yaseAlaska yesiNtu; NHPI = Umthonyama waseHawaii okanye esinye isiQithi sePacific.
* Ipesenti yababhalisi abagqibe ubuncinci uvavanyo lwe-v-safe health check-in kwiintsuku ezi-0 ukuya kwezi-7 emva kogonyo.
† Uthotho lokugonya oluphambili.
§ Kubandakanya abantu abafumene idosi yokuqala yeJanssen kunye nedosi enye eyongezelelweyo yokugonya kubavelisi abadwelisiweyo.
Emodeni,%† (n = 10,477)
I-Pfizer-BioNTech,%† (n = 11,284)
Iintsuku ukusukela kuthotho lokuqala, iMedian (IQR) 182 (164 - 198) 183 (161 - 204) 173 (141 - 182) 183 (157 - 209) 186 (161 - 217) 123 (113 - 182) 84 (16 - 136) 156 (140 - 164) 150 (136 - 167) 182 (160 - 202)
Nayiphi na indawo yokuphendula ngenaliti 80.9 64.6 75.0 69.4 81.7 83.3 25.0 70.3 80.3 74.9
Ukutshiza 20.0 11.8 0 8.4 10.2 16.7 10.4 6.3 7.6 13.9
Ubuhlungu 75.9 60.4 75.0 66.6 80.2 83.3 20.8 68.8 74.2 71.0
Ubomvu 25.2 8.3 0 9.8 20.8 16.7 6.3 7.8 12.1 17.1
Ukuvuvukala 33.6 17.4 0 16.8 30.5 16.7 6.3 12.5 18.2 24.8
Naluphi na ukuphendula kwenkqubo 75.2 59.7 50.0 65.1 76.1 100 31.3 68.8 63.6 69.9
Intlungu zesisu 8.4 3.5 0 6.4 8.1 16.7 4.2 3.1 6.1 7.3
IChills 31.3 8.3 50.0 17.5 33.5 50.0 8.3 23.4 10.6 24.1
Uhudo 9.9 7.6 0 9.0 9.6 16.7 8.3 6.3 9.1 9.4
Ukukhathala 61.8 44.4 0 51.0 60.9 83.3 14.6 48.4 50.0 56.0
intloko ebuhlungu 49.0 31.1 0 38.4 49.7 83.3 18.8 35.9 40.9 43.4
intlungu Joint 33.0 18.8 0 23.0 31.0 33.3 16.7 20.3 19.7 27.7
I sizathu 18.8 10.4 25.0 13.6 21.3 33.3 8.3 9.4 18.2 16.1
Ukuvutha 2.2 2.1 25.0 1.4 2.0 0 2.1 0 0 1.7
Nayiphi na impembelelo kwezempilo 39.2 19.4 0 25.2 39.1 33.3 16.7 28.1 24.2 31.8
Ayikwazi ukwenza imisebenzi yesiqhelo yemihla ngemihla 35.2 18.1 0 22.1 33.0 33.3 10.4 25.0 15.2 28.3
Andikwazi kusebenza okanye ukuya esikolweni 13.7 4.9 0 9.0 21.3 16.7 10.4 6.3 13.6 11.3
Unyango olufunekayo 2.1 1.4 0 1.5 3.0 0 6.3 0 0 1.8
Ikliniki 0.7 0.7 0 0.6 0.5 0 4.2 0 0 0.6
Utyelelo olungxamisekileyo 0.2 0 0 0.2 0 0 4.2 0 0 0.2
Bhedlele 0.05 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1
UMGANGATHO. Iziphumo ezingalunganga kunye neempembelelo zempilo ezichazwe ngabantu abafumene iidosi ezi-3 * zeModerna (N = 6,283) okanye iPfizer-BioNTech (N = 6,308) isitofu sokugonya se-COVID-19 kwaye sagqitywa kuvavanyo lokuhlola impilo-v olukhuselekileyo ngeentsuku eziyi-0 I-7 emva kwedosi nganye, ngenani ledosi- eunited States, Agasti 12 – Septemba 19, 2021